टी–२० विश्वकप छनोट खेल्न पारसको कप्तानीमा १८ सदस्यीय टोली छनोट, टीममा को-को परे ?
काठमाडौँ,- यही असोज १७ देखि २६ गतेसम्म मलेसियामा हुने आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा आज १८ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ ।
मलेशियामा हुने छनोट प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘बी’मा छ । नेपालको समूहमा चीन, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भूटान, सिङ्गापुर र मलेशिया रहेका छन् ।
नेपालले पहिलो खेल असोज १७ गते म्यानमारसँग खेल्नेछ । दोस्रो खेल २० गते मलेशियासँग, २१ गते थाइल्याण्डसँग, २४ गते चीनसँग र २६ गते सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट – प्रदेश नं. २ को विजयी शुरूवात
कोपा अमेरिका : पाराग्वेसँग अर्जेन्टिना बराबरीमा रोकियो